Xaflad lagu taageerayay waxqabadka maamulka G/Banaadir oo xalay lagu qabtay Muqdisho – Radio Muqdisho
Munaasabad lagu taageerayay mashaariicda horumarineed ee ka socota magaalada Muqdisho ayaa xalay lagu qabtay xarunta degmada Kaaraan ee G/Banaadir.
Xafladda ayaa waxaa ka qeybgalay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, waxaana halkaasi khudbado kula duwan ka jeediyay mas’uuliyiintii ka qeybgalay xafladaasi, kuwaasoo ka hadlay ahmiyadda ay leeyihiin mashaariicda horumarineed ee ka socda caasimadda.
Xubnihii ka hadlay munaasabaddaasi ayaa maamulka gobolka Banaadir ku amaanay dadaallada wax tarka leh ee uu ka wado magaalada Muqdisho, waxeyna hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in la sii kordhiyo mashaariicda lagu horumarinayo caasimadda.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Muungaab oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in maamulka gobolku qorsheeynayo mashaariic balaaran oo lagu horumarinayo adeegyada bulshada ee gobolka Banaadir, isagoo ka dalbaday bulshada ineey ka qeeyb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
in ka badan 10 Qof oo loo maleenayo in ay sumooween oo ku geeriyooday Degmada Yaaqshiid